Brazil နိုင်ငံက ကားတွေကို Argentina သို့တင်ပို့နေပြီဖြစ်တဲ့ Nissan! – AutoMyanmar
Brazil ရဲ့ Rio de Janeiro မှာရှိတဲ့ Nissan စက်ရုံကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က Made in Brazil ကားတွေကို Argentina သို့ပို့ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့် မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲ Argentina လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ Made in Brazil ကားတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါ။ Rio de Janeiro မှာရှိတဲ့စက်ရုံအနေနဲ့ Global Crossover ကားပေါင်း ၉၃၃ ကားကို ပထမဉီးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖြန့်ချီဖူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Brazil ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ဆက်လက်ဖြန့်ချီဖို့ ဉီးတည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ဖြန့်ချီရာမှာ Nissan ရဲ့ပထမဉီးဆုံး Milestone ကတော့ Latin America ကိုတင်ပို့ဖြန့်ချီနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Latin America မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Argentina ကိုတင်ပို့ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့် Nissan ရဲ့ပထမဉီးဆုံး Milestone ကိုရောက်ရှိသွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။
The initial batch of Kicks will be available at Argentinean dealerships in the beginning of 2018. Made in Brazil with Japanese quality and technology, the model will replace the Kicks made in Mexico.
Source : Nissan-global
လက်ရှိ Argentina ကိုတင်ပို့ထားတဲ့ကားတွေကိုတော့ Argentinean dealerships ကို ၂၀၁၈ အစောပိုင်းလောက်မှာရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် Argentina Market ကို ၂၀၁၈ မှာရောက်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာ။ Made in Brazil ဆိုပေမယ့်လည်း Quality ပိုင်းနဲ့ Technology ပိုင်းကတော့ ဂျပန်ကပါ။ မကြာခင်မှာပဲ Made in Brazil model တွေကို Made in Mexico ပြောင်းလဲတော့မယ်လို့လဲဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ Argentina ဟာ Rio de Janeiro မှာရှိတဲ့ Nissan စက်ရုံကထုတ်တဲ့ကားတွေကို ပထမဉီးဆုံး တင်သွင်းခြင်းခံရတဲ့ Latin America နိုင်ငံတစ်ခုပါ။
“Nissan’s Resende Industrial Complex was built to meet the demands of domestic and Latin America (LATAM) markets,” said Hitoshi Mano.
Hitoshi Mano ပြောကြားချက်အရ သူတို့ Rio de Janeiro မှာစက်ရုံတည်ဆောက်ခဲ့တာ Latin America Markets (LATAM) မှာနေရာယူချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ဝက်ကျော်လောက်ပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း Latin America Markets မှာနေရာ ရရှိ/မရရှိ၊ ရရှိခဲ့ရင်လည်း Sale Target တွေ၊ နောက်ထပ်ဖြန့်ချီမယ့်နေရာအသစ်တွေကို ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေဆက်ပြီး ချသွားမလဲဆိုတာကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Nissan Kicks made in Brazil now shipped to Argentina #Nissan #KICKS https://t.co/TIL9sUJeqj pic.twitter.com/cH8S4iWNke
— CornwallNissan (@CornwallNissan) December 22, 2017